Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao: Baiboly Mazava sy Manohina ny Fo
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Batak (Toba) Bengali Bicol Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kazakh Kikamba Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kissi Koreanina Kreôla any Haïti Krio Kroaty Lamba Letonianina Lhukonzo Litoanianina Luganda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mixe (Afovoany) Mongol Mooré Ndau Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Népali Oromo Ossète Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Romanianina Rosianina Runyankore Samoanina Sango Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Shona Sidama Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Failandey Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tseky Turkmène Turkmène (Sirilika) Tuvalu Tzotzil Télougou Vietnamianina Waray-Waray Wolaita Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany)
‘Velona ny tenin’Andriamanitra.’—HEB. 4:12.
HIRA: 37, 116
Nahoana no tokony ho hita ao amin’ny Baiboly ny anaran’Andriamanitra?
Nahoana no nohavaozina ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao?
Nahoana ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao no mahasoa ny vahoakan’Andriamanitra?
1. a) Inona no nasain’Andriamanitra nataon’i Adama? b) Inona no nataon’ny mpanompon’i Jehovah mba hampiasana ny fahaizany miteny?
NATAON’I Jehovah Andriamanitra mahay miteny ny olombelona. Nasainy nanome anarana ny biby i Adama tany Edena, ary nila niteny i Adama rehefa nanao izany. Nahira-tsaina izy ka nahita anarana mety tsara hiantsoana ny biby tsirairay. (Gen. 2:19, 20) Nampiasa ny fahaizany miteny ny mpanompon’i Jehovah nanomboka teo ka hatramin’izao, mba hiderana azy sy hampahafantarana ny sitrapony. Mandika Baiboly koa izy ireo, ary tena mampandroso ny fivavahana marina izany.
2. a) Inona no fitsipika narahina rehefa nandika ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao? b) Inona no hodinihintsika ato?
2 An’arivony ny fandikan-tenin’ny Baiboly. Mitovy amin’ny Soratra Masina tany am-boalohany ny sasany, fa ny sasany tsy toy izany. Nanapa-kevitra ny Komitin’ny Fandikana ny Baibolin’ny Tontolo Vaovao, taorian’ny 1940, fa hanaraka an’ireto fitsipika ireto rehefa mandika Baiboly: 1) Hanamasina ny anaran’Andriamanitra, ka hamerina azy io ao amin’izay toerana tokony hisy azy ao amin’ny Soratra Masina. (Vakio ny Matio 6:9.) 2) Handika ara-bakiteny ny Tenin’Andriamanitra raha mbola azo atao. Raha atahorana ho diso kosa ilay izy rehefa adika ara-bakiteny, dia ny tena heviny no hadika. 3) Hampiasa fiteny mora azo, mba hahatonga ny olona hazoto hamaky. * (Vakio ny Nehemia 8:8, 12.) Ireo fitsipika ireo no narahina rehefa nandika ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao ho amin’ny fiteny 130 mahery. Hodinihintsika ato hoe ahoana no nampiharana an’ireo rehefa nandika an’ilay Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (anglisy) nohavaozina, izay nivoaka tamin’ny 2013.
MANAMASINA NY ANARAN’ANDRIAMANITRA
3, 4. a) Inona no Baiboly sora-tanana fahiny ahitana ny anaran’Andriamanitra? b) Inona no nataon’ny mpandika Baiboly maro?
3 Gaga izay olona mandinika ny Baiboly sora-tanana amin’ny teny hebreo, satria hita imbetsaka ao amin’izy ireny ny Litera Efatra, izany hoe ny anaran’Andriamanitra amin’ny teny hebreo. Ahitana azy io, ohatra, ao amin’ny Horonam-bokin’ny Ranomasina Maty. Ahitana azy io koa ny kopia sasany amin’ny Fandikan-teny Grikan’ny Fitopolo natao tamin’ny taonjato faharoa T.K. ka hatramin’ny taonjato voalohany A.K.
4 Maro ny fandikan-teny tsy ahitana intsony ny anarana masin’Andriamanitra, na dia voaporofo mazava aza fa tokony ho ao amin’ny Baiboly izy io. Roa taona monja taorian’ny nivoahan’ny Soratra Grika Kristianina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (anglisy), ohatra, dia nivoaka ny Dikan-teny Mahazatra Nohavaozina (anglisy), tamin’ny 1952. Nesorina tao ny anaran’Andriamanitra. Nahoana? Hoy ny sasin-tenin’io Baiboly io: ‘Tena tsy mety amin’ny Fiangonana Kristianina mihitsy ny miantso an’Andriamanitra amin’ny anarany, na iza izany anarany izany na iza.’ Tsy narahin’ireo nandika azy io intsony ilay fitsipika narahin’ireo olona nandika ny Dikan-teny Amerikanina Mahazatra, tamin’ny 1901. Nesorina koa ny anaran’Andriamanitra tao amin’ny Baiboly maro amin’ny teny anglisy sy amin’ny fiteny hafa.
5. Nahoana no tokony ho hita ao amin’ny Baiboly ny anaran’Andriamanitra?
5 Nahoana no tsy tokony hesorina ao amin’ny Baiboly ny anaran’Andriamanitra? Tokony hahazo tsara ny hevitra tian’ny mpanoratra hampitaina ny mpandika teny mahay, ary tokony ho hita taratra amin’ny zavatra voadikany izany. Maro be ny andininy ahitana hoe manan-danja ny anaran’Andriamanitra, ary tokony hohamasinina. (Eks. 3:15; Sal. 83:18; 148:13; Isaia 42:8; 43:10; Jaona 17:6, 26; Asa. 15:14) I Jehovah Andriamanitra no nampanoratra ny Baiboly, ary nasainy nosoratana imbetsaka tao ny anarany. (Vakio ny Ezekiela 38:23.) Hita inarivony ao amin’ny Baiboly sora-tanana fahiny ny anarany, ka tsy manaja azy izay manala azy io.
6. Nahoana no niampy enina ny anaran’Andriamanitra, ao amin’ilay Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao nohavaozina?
6 Mihamaro ny porofo manamarina fa tokony ho ao amin’ny Baiboly ny anaran’Andriamanitra. Hita imbetsaka ao amin’ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao nohavaozina ilay anarana. Mahatratra 7 216 izany, izany hoe miampy 6. Ao amin’ny 1 Samoela 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16 ny dimy. Nahoana no nampidirina tao ilay anarana? Tsy hita ao amin’ireo andininy ireo io anarana io ao amin’ny Soratra Hebreo nosoratan’ny Masoreta, izay nampiasaina rehefa nandika ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao tamin’ny 1984. Hita ao amin’ireo andininy ireo kosa ilay anarana, rehefa jerena ny Horonam-bokin’ny Ranomasina Maty, izay efa nisy 1000 taona mahery talohan’ilay an’ny Masoreta. Nampidirina ao amin’ny Mpitsara 19:18 koa ilay anarana, rehefa nodinihina tsara ny sora-tanana fahiny.
7, 8. Inona no dikan’ilay anarana hoe Jehovah?
7 Misy heviny lehibe amin’ny tena Kristianina ilay anarana hoe Jehovah. Miresaka an’izany ny fanazavana fanampiny ao amin’ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao nohavaozina. Avy amin’ny matoanteny hebreo hoe havah ilay anarana. “Manao Izay Hahatonga Izy” no dikan’io anarana io, araka ny hevitry ny Komitin’ny Fandikana ny Baibolin’ny Tontolo Vaovao. * Nampiasa ny Eksodosy 3:14 isika taloha rehefa nanazava an’io anarana io. Voalaza ao hoe: “Hoporofoiko fa Izaho Ilay Mahavita Izay Iriko.” Izany no nahatonga an’ilay fandikan-teny tamin’ny 1984 hilaza fa “manao izay hahatonga ny tenany ho ilay Mpanatanteraka fampanantenana” i Jehovah. * Izao anefa no voalazan’ny Fanazavana Fanampiny A4 ao amin’ilay Baiboly nohavaozina: “Tsy izay ihany anefa no hevitry ny anarany, satria iray amin’ny toetra mampiavaka an’i Jehovah fotsiny izany. Tsy hoe ny tenany ihany mantsy no afaka miova araka izay iriny, fa ny zavaboariny koa azony ampiasaina sy ovana amin’izay rehetra ilany azy mba ho tanteraka izay kasainy.” (Jereo koa ny bokikely Tari-dalana Hianarana ny Tenin’Andriamanitra, pejy 5).
8 Azon’i Jehovah ampiasaina araka izay ilany azy ny zavaboariny. Nataony, ohatra, izay hahatonga an’i Noa hahay hanamboatra sambofiara. Nataony lasa tena nahay nanao asa tanana koa i Bezalila. I Gideona indray lasa mpiady mahery, ary i Paoly lasa apostoly ho an’ny hafa firenena. Misy heviny lehibe amin’ny vahoakany tokoa ny anaran’Andriamanitra. Tsy nanala azy io tao amin’ny Baiboly àry ny Komitin’ny Fandikana ny Baibolin’ny Tontolo Vaovao, satria tsy nihevitra azy io ho tsy misy dikany.
9. Inona no antony iray amoahantsika Baiboly amin’ny fiteny be dia be?
9 Efa misy amin’ny fiteny 130 mahery izao ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Nanamasina ny anaran’Andriamanitra ireo nandika azy io, ka nampiditra an’izany ao amin’ny andininy tokony hisy azy. (Vakio ny Malakia 3:16.) Mihabetsaka kosa ny mpandika Baiboly manala an’io anarana io, ka manolo izany amin’ny anaram-boninahitra hoe “Tompo” na amin’ny anaran’andriamanitra hafa. Miezaka àry ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah mba hamoaka Baiboly manome voninahitra ny anaran’Andriamanitra, ary tiany ho be dia be ny olona manana azy io.
MAZAVA TSARA SY MARINA
10, 11. Inona no olana sasany hita rehefa nandika ny Baiboly Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao?
10 Sarotra ny nandika ny Soratra Masina ho amin’ny fiteny maro. Misy an’ilay teny hebreo hoe Sheôl, ohatra, ao amin’ny Baiboly sasany amin’ny teny anglisy, ka izay koa no natao tao amin’ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao anglisy teo aloha. Izao no nandikana ny Mpitoriteny 9:10: “Tsy misy asa na eritreritra na fahalalana na fahendrena ao amin’ny Sheôl, izay toerana halehanao.” Nisy an’io teny io koa tao amin’ny Baiboly amin’ny fiteny hafa. Tsy hain’ny ankamaroan’ny olona anefa ny hoe “Sheôl”, sady tsy hita ao amin’ny diksionera amin’ny fiteniny. Nisy koa nihevitra hoe anaran-toerana izy io. “Fasana” anefa no dikan’ilay hoe Sheôl sy ilay teny grika mitovy dika aminy hoe Haides. Nomena alalana hampiasa an’ilay hoe “Fasana” àry ireo mpandika ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Io no marina sy mazava kokoa.
11 Sarotra koa ny nandika an’ilay teny hebreo hoe nefesh sy ilay teny grika hoe psykè. Nadika hoe “fanahy” izy ireo tamin’ny fiteny sasany, nefa diso ny fahazoan’ny olona azy. Zavatra tsy hita maso ao amin’ny olombelona na matoatoa mantsy no tonga ao an-tsainy rehefa mandre hoe fanahy, fa tsy vatan’olombelona. Nomena alalana àry ny mpandika ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao hoe arakaraka ny teny manodidina no handikana ny nefesh sy psykè. Hazavaina any amin’ny Fanazavana Fanampiny ao amin’io Baiboly io koa ny dikan’ireo teny ireo. Niezaka nampiasa teny mora azo ny mpandika teny, ary matetika ilay izy no hazavaina bebe kokoa eny amin’ny fanamarihana ambany pejy.
12. Inona no niezahana natao rehefa nohavaozina ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny teny anglisy? (Jereo ato koa ilay hoe “Nohavaozina ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao.”)
12 Mandefa fanontaniana maro be any amin’ny foibe ny mpandika teny, ka hita avy amin’izy ireny fa misy teny hafa koa mety tsy hazava amin’ny olona. Nanapa-kevitra àry ny Filan-kevi-pitantanana tamin’ny Septambra 2007 fa hohavaozina ny Baiboly amin’ny teny anglisy. Fanontaniana an’arivony avy amin’ny mpandika teny no nodinihina. Nosoloana izay teny efa tranainy, ary teny tsotra sy mazava nefa marina tsara no niezahana nampiasaina. Tena nilaina àry ireo fanontaniana napetraky ny mpandika teny eran-tany. Nanatsara ny teny anglisy ao amin’ilay Baiboly nohavaozina izy ireny.—Ohab. 27:17.
TIAN’NY OLONA ILAY IZY
13. Inona no porofo fa tian’ny olona ilay Baiboly anglisy nohavaozina?
13 Tian’ny olona ve ilay Baiboly anglisy nohavaozina? Naharay taratasy fankasitrahana maro be ny foibentsika any Brooklyn. Maro no mitovy hevitra amin’ity anabavy iray ity. Hoy izy: “Toy ny vata feno firavaka sarobidy ny Baiboly. Rehefa mamaky ny tenin’i Jehovah ao amin’ilay Baiboly nohavaozina nivoaka tamin’ny 2013 ianao, dia toy ny hoe mandinika ny firavaka tsirairay ao amin’ilay vata, ary hitanao tsara ny endriny sy ny lokony ary ny hatsarany. Mazava tsara sy tsotra ilay izy ka lasa mahalala kokoa an’i Jehovah aho izao. Hoatran’ny hoe dadako izy, ka sady mamihina ahy no mamaky ny Teniny amiko. Maivamaivana erỳ aho.”
14, 15. Inona no tsapan’ny olona rehefa voadika tamin’ny fiteniny ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao?
14 Tsy ilay Baiboly anglisy nohavaozina ihany no be mpitia. Hoy ny lehilahy zokiolona iray any Sofia, any Boligaria, momba ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao amin’ny teny boligara: “Efa an-taonany maro aho no namaky Baiboly, nefa mbola tsy nahita fandikan-teny mazava tsara sy manohina ny fo hoatran’ity.” Hoy koa ny anabavy albaney iray rehefa nahazo ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao manontolo, tamin’ny fiteniny: “Mahafinaritra erỳ ny mamaky ny Tenin’Andriamanitra amin’ny teny albaney! Voninahitra tokoa ny mandre an’i Jehovah miresaka aminay amin’ny fiteninay!”
15 Lafo ny Baiboly any amin’ny tany maro sady tsy misy firy, ka faly be ny olona rehefa mahazo Baiboly. Hoy ny tatitra iray avy any Rwanda: “Betsaka ny mpianatra Baiboly tsy nandroso, nandritra ny taona maro, satria tsy nanana Baiboly. Tsy nisy afa-tsy Baiboly navoakan’ny eglizy teto, nefa tsy voavidin’ny olona ilay izy. Matetika koa no tsy azon’izy ireo ny andininy sasany ka tsy nandroso ry zareo.” Niova anefa izany rehefa voadika tamin’ny fitenin’izy ireo ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Hoy ny fianakaviana iray nisy tanora efatra: “Tena misaotra an’i Jehovah sy ny mpanompo mendri-pitokisana sy malina izahay nanome anay an’ity Baiboly ity. Mahantra kely izahay ka tsy mahavidy Baiboly ho anay rehetra. Samy manana ny Baiboliny anefa izahay izao. Te hisaotra an’i Jehovah izahay ka miara-mamaky Baiboly isan’andro.”
16, 17. a) Inona no fanirian’i Jehovah ho an’ny vahoakany? b) Inona no tokony hataontsika?
16 Mbola ho voadika amin’ny fiteny maro ny Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao nohavaozina. Miezaka manakana an’izany i Satana. Matoky anefa isika fa tian’i Jehovah hihaino azy ny vahoakany rehetra, ka tsy maintsy hataony mazava sy mora azo ny Teniny. (Vakio ny Isaia 30:21.) Tsy ho ela dia “ho feno fahalalana an’i Jehovah ny tany, toy ny anaronan’ny rano ny fanambanin’ny ranomasina.”—Isaia 11:9.
17 Ampiasao tsara àry izay fanomezana avy amin’i Jehovah, anisan’izany ilay fandikan-teny manome voninahitra ny anarany. Avelao hiresaka aminao isan’andro izy, amin’ny alalan’ny Teniny. Mahavita mihaino tsara ny vavaka ataontsika rehetra koa izy satria tsy manam-petra ny fahaizany. Hahalala azy kokoa isika vokatr’izany, ka vao mainka ho tia azy.—Jaona 17:3.
“Voninahitra tokoa ny mandre an’i Jehovah miresaka aminay amin’ny fiteninay!”
^ feh. 2 Jereo ny Fanazavana Fanampiny A1 ao amin’ilay Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (anglisy) nohavaozina, sy ilay hoe “Inona no Baiboly Tokony Hovakinao?”, ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Mey 2008.
^ feh. 7 Misy boky hafa milaza an’izany koa. Samy manana ny heviny anefa ny manam-pahaizana.
^ feh. 7 Jereo ilay hoe “Ny Anaran’Andriamanitra ao Amin’ny Soratra Hebreo”, Fanazavana Fanampiny 1A, ao amin’ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao, pejy 1851.
Hizara Hizara Baiboly Mazava Tsara sy Manohina ny Fo